Radio Don Bosco - Vaovaon'ny RDB
100 taona, jobilim-pahasoavana
Naseho ny : 20 janoary 2020
Manentana ny kristianina rehetra ny Arsevekan'Antananarivo, Mgr Odon Marie Arsène Razanakolona, tamin'ny alahady 12 janoary 2020, mba hifarimbona amin'ny fampivoarana ny fanabeazana sy ny fanatsarana ny Seminera zandriny Ambohipo, amin'ny mandritra ny fiomanana ny fankalazana faha-zato taona.
Famalifaliana ny ankizy tsaboina ao amin'ny hôpitaly Bambino Gesù
Naseho ny : 17 janoary 2020
Nanatanteraka hetsika ho famalifaliana ny ankizy tsaboina ao amin'ny hôpitamin'ny ankizy "Bambino Gesù", ny zoma 17 janoary, ny "dicastère" misahana ny fampivoarana ny mahaolona manontolo sy io hôpitaly iandraiketan'ny Fiketrahana Masina io.
Fanodinana fako ao Vatican
Nametraka fepetra vaovao hifehezana sy hanavahana ny fako ahafahana manodina azy ho mbola azo ampiasaina indray ny ao Vatican.
Relijiozy, olon’ny hafaliana sy fanantenana
«Olon’ny fanantenana sy ny hafaliana ny Relijiozy. Mila mijoro ho fanasina mandrakariva ianareo”, hoy Mgr Odon Marie Arsène Razanakolona, tamin’ireo relijiozy teto amin’ny Arsidiosezin’Antananarivo tonga nirary soa azy ireo ny sabotsy 28 desambra 2019 tao amin’ny Sekoly Maria Manjaka, tantanin’ny Fikambanan’ny Masera Saint Joseph de Cluny.
Pejy 100 amin'ny 105